Maru OS. Android iyo Debian, oo ku jira hal qalab. | Laga soo bilaabo Linux
210 | | Android, Qaybinta, GNU / Linux, Noticias
Hore ayaan uga hadalnay arinta isku duubni ay soo saartay Ubuntu oo looxeedyadeeda cusub ah. Isku-shaandhaynta, oo ay si weyn u rajeynayaan adeegsadayaashan, ayaa u furaysa waddada isu-duwidda aaladdaadu ku xirnaan karto hawlahaaga. Kala duwanaanshahan, kordhinta howlaha kumbuyuutarka adoo ku daraya daaqadaha, wuxuu kuu fududeyn karaa howl maalmeedkaaga siyaabo badan PC-ga iyo taleefankaaga gacanta. Sidaa darteed, ma aha wax lala yaabo, rabitaanka weyn ee dhammaan adeegsadayaasha gacanta ku haya taleefannada gacanta iyo kombuyuutarrada, nidaamyada bixiya xaruntan.
Hadda, markan waxaan ka hadli doonaa Maru OS, ka ROM kaas oo bixiya awoodda aad ugu isticmaali karto Debian qalabkaaga Android. Waxay ku saleysan tahay Android 5.1 Lollipop oo wuxuu hadda ku jiraa nooca beta.
Maru OS waxay bixisaa suurtagalnimada isku xirka qalabkaaga Android si aad ula socoto kumbuyuutarka, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ka hoos shaqeysid desktop-ka, taas oo iyaduna suurtogal ka dhigeysa inaad ku xirto qalabkaaga mobilada qalabka PC-ga; jiir iyo kiiboodh Si fudud ugu xir mobilkaaga kormeeraha kombiyuutarka, halkaas oo aad hadhow ka daawan karto Debian shaashadda kormeeraha. Sidan ayaad fursad ugu heli doontaa inaad si isku mid ah u wada qabato labada Debian iyo Android; midda koowaad ee kormeerahaaga, iyo tan labaad ee qalabkaaga mobilada.
Nidaamka faylka Android ayaa laga heli karaa iyada oo loo marayo desktop. Waxaa intaa dheer, looma baahna doono in la furo ama dib loo geliyo SD si loo helo waxyaabaha ay ka kooban tahay. Dhinaca kale nidaamka feylka muhiimka ah waxaa lagu keydiyaa SD.
Kuwa kaydiya faylashooda, keydku wuxuu u suurta geli doonaa labada nidaam midkood iyo kan kale. Wax ka beddelka Android ROM waa mid fudud oo xulasho leh, kana takhalusaysa baahida loo qabo in gebi ahaanba wax laga beddelo aaladda, taas oo iyaduna suurtogal ka dhigaysa in loo maareeyo aaladda Android nidaam kale oo GNU / Linux ah.
Waa in lagu xisaabtamo in aaladda maamusha xiriirkan ay tahay inay lahaato astaamo gaar ah oo lagu wado Debian-ka Android:
Kaararka SD ee awood badan oo ballaaran; markaa waxaa loo isticmaali karaa laba qaybood, mid baruur iyo tan kale oo leh nidaamyo fayl oo iswada waafaqsan oo GNU / Linux ah (Debian root filesystem ayaa ku yaal qaybta labaad). Qalabka SDK ee Android. Awoodda Flash ee qalabka, oo lagu daro kombiyuutarka GNU / Linux ee leh akhristaha kaarka SD.
Waxaa xusid mudan in qalabka hadda la jaan qaada teknolojiyaddan ay tahay Nexus 5.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Android » Maru OS. Android iyo Debian, oo ku jira hal qalab.
Qashin qubka dijo
Xiiso leh; aad u xun uma muuqato in lagu rakibayo aalado kale marka laga reebo isku-xirnaanta. Mid ka mid ah "cilladaha" ee aan ku arko nidaamkan ayaa ah in aaladda "yar" sida mobilka; xitaa haddii aad tahay nexus 5, uma maleynayo inaad sida ugu badan uga faa'iideysan karto; gaar ahaan heerka terminalka. Weli, waa fikrad aad u xiiso badan oo leh awood weyn.
Ku jawaab Drassill
Xaqiiqdii ma sahlana in la kala wareego qalabka kala duwan ee adduunka Android, weli waa fikrad weyn.
Juanjo Marin dijo
Fikradani maahan mid cusub. Motorola, kahor intaysan la wareegin Google, waxay lahayd terminaallo sida Atrix 4G oo la yimid Android iyo mini Linux distro ah. Waxay ahayd distro aasaasi ah "webtop" oo ku saleysan Debian / Ubuntu oo la falgashay xogta moobiilka, laakiin waxay la timid Firefox dhameystiran. Dadku waxay ku guuleysteen inay rakibaan xirmooyin badan. Dheeraad ah. Motorola waxay soo bandhigtay waxyaabo dheeri ah, sida lapdock iyo dock, oo Canonical ay u adeegsatay Ubuntu ee demo Android, taas oo ahayd isla fikradda.
Waxaan u maleynayaa in hadda si ka wanaagsan loo dhaqan gelin karo, iyadoo la imaanayo muuqaalada cusub ee kernel sida cgroups
Jawaab Juanjo Marin
Waxay ila tahay aniga fikrad aad u wanaagsan, wax walba oo ah in wax loo fududeeyo dadka isticmaala Android ayaa caawiya, waxaan rajeynayaa waqti kadib inay ku hirgelin karaan aalado badan taas.
Dowladda Ruushka waxay tixgelinaysaa u beddelashada Linux